HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Lamba Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany)
‘Eritrereto ny fitiavana nasehon’ny Ray antsika.’—1 JAONA 3:1.
HIRA: 91, 13
Nahoana ny olona sasany no tsy mino hoe tia azy i Jehovah?
Nahoana isika no afaka milaza hoe tia antsika i Jehovah matoa manome izay ilaintsika sy mampianatra antsika?
Nahoana isika no afaka milaza fa tia antsika i Jehovah matoa manoro hevitra sy mananatra antsika?
1. Nasain’i Jaona nanao inona ny Kristianina, ary nahoana?
HOY ny apostoly Jaona ao amin’ny 1 Jaona 3:1: ‘Eritrereto ny fitiavana nasehon’ny Ray antsika.’ Nampirisika ny Kristianina i Jaona mba hisaintsaina momba ny fitiavan’Andriamanitra sy ny halehiben’izany. Tena tokony hanao izany isika. Vao mainka isika ho tia an’i Jehovah sy hifandray kokoa aminy raha fantatsika tsara ny fitiavany antsika.
2. Nahoana ny olona sasany no tsy mino hoe tia azy Andriamanitra?
2 Misy anefa tsy mino hoe tian’Andriamanitra ny olombelona. Mihevitra izy ireo fa mampahatahotra sy tsy maintsy ankatoavina Andriamanitra. Misy koa nampianarina zavatra diso, ka lasa mihevitra fa ratsy fanahy sy tsy mahatehotia Andriamanitra. Misy indray mino fa tia azy foana Andriamanitra na inona na inona ataony na tsy ataony. Nianaranao tao amin’ny Baiboly fa ny fitiavana no toetra mampiavaka an’i Jehovah, ary io no nahatonga azy hanome ny Zanany ho vidim-panavotana ho antsika. (Jaona 3:16; 1 Jaona 4:8) Mety ho sarotra aminao anefa ny hino hoe tena tia anao Andriamanitra. Ny zavatra niainanao na nampianarina anao angamba no mahatonga izany.
3. Inona no tokony ho fantatsika mba hinoantsika fa tia antsika Andriamanitra?
3 Inona àry no manaporofo fa tia antsika i Jehovah? Misy zavatra tokony ho fantatsika mba hahalalantsika an’izany. I Jehovah no Mpamorona ny olombelona rehetra. (Vakio ny Salamo 100:3-5.) Izany no antony iantsoan’ny Baiboly an’i Adama hoe “zanak’Andriamanitra.” Nasain’i Jesosy niantso an’Andriamanitra hoe “Rainay izay any an-danitra” koa ny mpanara-dia azy. (Lioka 3:38; Mat. 6:9) I Jehovah no Mpanome aina ka izy no Raintsika, ary toy ny hoe zanany isika. Tia antsika i Jehovah, toy ny itiavan’ny ray mahafoy tena ny zanany.
4. a) Nahoana i Jehovah no tsy mitovy amin’ny ray olombelona? b) Inona no hodinihintsika ato sy ao amin’ny lahatsoratra manaraka?
4 Tsy lavorary ny ray olombelona. Tsy ho vitan’izy ireo mihitsy ny haneho fitiavana mitovy amin’ny an’i Jehovah, na dia miezaka mafy aza izy ireo. Ny raim-pianakaviana sasany aza mampijaly zanaka, ka misy vokany ratsy eo amin’ny fo sy ny sain’ilay zanany izany any aoriana. Mampalahelo izany, ary tena zava-doza! Soa ihany fa tsy toy izany i Jehovah. (Sal. 27:10) Azo antoka fa te hanatona azy kokoa isika rehefa mahalala fa tia sy mikarakara antsika izy. (Jak. 4:8) Andao isika handinika porofo efatra manamarina hoe tia antsika i Jehovah. Ho hitantsika ao amin’ny lahatsoratra manaraka kosa ny fomba efatra azontsika anaporofoana fa tia azy isika.
MANOME AN’IZAY ILAINTSIKA IZY
5. Inona no nolazain’ny apostoly Paoly tamin’ny olona tao Atena?
5 Tsikaritry ny apostoly Paoly, tamin’izy tany Atena, any Gresy, fa feno sampy ilay tanàna. Nino ny olona tao Atena fa ireny sampy ireny no andriamanitra nanome aina azy ireo sy nanome izay nilainy. Hoy àry i Paoly: ‘Ilay Andriamanitra nanao izao tontolo izao sy ny zava-drehetra ao aminy no manome ho an’ny olon-drehetra ny aina sy ny fofonaina ary ny zava-drehetra. Fa izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary isiantsika.’ (Asa. 17:24, 25, 28) Tia antsika tokoa i Jehovah, ka manome “ny zava-drehetra” ilaintsika mba hahavelona antsika. Inona avy izany?
6. Nahoana ny tany no porofo fa tia antsika i Jehovah? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
6 Diniho, ohatra, ny tany. I Jehovah no nanao azy io, ary “nomeny ho an’ny zanak’olombelona” izy io. (Sal. 115:15, 16) Mandany vola be hankanesana any ambony tsy taka-maso ny mpahay siansa mba hitady planeta mitovitovy amin’ny tany. Nahita planeta an-jatony izy ireo nefa tsy nahita hoatran’ity tany ity mihitsy. Eto ihany no misy ny zava-drehetra ilain’ny olona mba hahavelona azy. Miavaka ny tany rehefa dinihina ny planeta maro be ao amin’ny vahindanitra misy azy sy any ivelany. Tsy nataon’i Jehovah azo onenana fotsiny ny tany. Nataony tsara tarehy sy misy izay ilaina koa izy io ary nataony voaro amin’izay zavatra mety hanimba azy. (Isaia 45:18) Tena tia antsika i Jehovah!—Vakio ny Joba 38:4, 7; Salamo 8:3-5.
7. Nahoana ny fomba namoronana antsika no ahitana fa tia antsika i Jehovah?
7 Rehefa mahatsapa ny ankizy hoe tia azy sy mikarakara azy ny ray aman-dreniny, dia amin’izay izy vao tena hahatsiaro ho tsy manana ahiahy. Fantatr’i Jehovah koa fa tsy tany tsara tarehy ihany no ilaintsika mba hahasambatra sy hahafa-po antsika. Nataony mahay manahaka ny toetrany àry ny olombelona, ka sady afaka mahatsapa ny fitiavany no afaka mamaly fitia azy. (Gen. 1:27) Hoy koa i Jesosy: “Sambatra ny mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.” (Mat. 5:3) Ray be fitiavana i Jehovah, ka “manome antsika be dia be ny zava-drehetra mba hifaliantsika.”—1 Tim. 6:17; Sal. 145:16.
MAMPIANATRA ANTSIKA NY MARINA IZY
8. Nahoana isika no matoky fa tia antsika ilay “Andriamanitry ny fahamarinana”?
8 Miaro ny zanany tsy ho voafitaka ny ray tia zanaka. Tsy mahavita manoro an-janany an’izay tokony hatao anefa ny ray aman-dreny maro, satria na izy aza tsy mankatò ny fitsipiky ny Baiboly. Matetika no alahelo sy korontana no vokatr’izany. (Ohab. 14:12) I Jehovah kosa “Andriamanitry ny fahamarinana.” (Sal. 31:5) Tiany ny zanany ka mahafinaritra azy ny mampahafantatra azy ireo ny marina. Mitari-dalana azy ireo eo amin’ny fiainany izany, indrindra eo amin’ny resaka fivavahana. (Vakio ny Salamo 43:3.) Inona no ampahafantarin’i Jehovah antsika, ary nahoana izany no manaporofo fa tia antsika izy?
Manahaka an’i Jehovah ny raim-pianakaviana kristianina ka mampianatra Baiboly ny zanany ary manampy azy ireo hifandray amin’ilay Rainy any an-danitra (Fehintsoratra 8-10)
9, 10. Nahoana no ampahafantarin’i Jehovah antsika ny a) momba azy? b) momba antsika?
9 Voalohany, ampahafantarin’i Jehovah antsika ny momba azy. Lazainy amintsika ny anarany. Io no anarana miverina imbetsaka indrindra ao amin’ny Baiboly. Te hanatona antsika i Jehovah matoa manao an’izany. (Jak. 4:8) Lazainy amintsika koa ny toetrany. Marina fa hita amin’ny zavatra noforoniny hoe mahery sy manam-pahendrena izy. Resahiny ao amin’ny Soratra Masina koa anefa fa manao ny rariny izy ary tsy misy fetra ny fitiavany. (Rom. 1:20) Mora amintsika àry ny minamana akaiky amin’i Jehovah satria tsy ray manam-pahendrena sy mahery fotsiny izy fa manao ny rariny sy be fitiavana koa.
10 Faharoa, ampahafantarin’i Jehovah antsika ny marina momba antsika mba hahasoa antsika. Nilaza izy fa anisan’ny fianakaviany isika. Nohazavainy koa izay tokony hataontsika raha te hiray saina sy hihavana tsara amin’ireo rehetra ao anatin’io fianakaviana io isika. Ampianariny antsika ao amin’ny Baiboly hoe tsy natao hahaleo tena ny olombelona fa tsy maintsy miankina aminy. Nilaza koa izy fa ho ratsy ny vokany raha tsy miankina aminy izy ireo. (Jer. 10:23) Tena ilaintsika ny mahafantatra an’izany. Tsy hihavana sy tsy hiray saina mihitsy isika raha tsy manaiky ny fahefan’i Jehovah. Tena tia antsika i Jehovah matoa milaza an’izany rehetra izany.
11. Inona no ampanantenain’i Jehovah antsika ka ahitana fa tia sy miahy antsika izy?
11 Mieritreritra ny hoavin-janany ny ray be fitiavana satria tiany ho sambatra izy ireo. Mampalahelo fa tsy mahalala izay hitranga amin’ny hoavy ny ankamaroan’ny olona. Misy koa lany andro amin-javatra tsy tena mahasoa. (Sal. 90:10) Isika kosa mahatsapa hoe tena tian’ilay Raintsika any an-danitra satria mampanantena hoavy tsara ho antsika izy. Sambatra sy afa-po àry isika dieny izao.
MANORO HEVITRA SY MANANATRA IZY
12. Nahoana ny torohevitr’i Jehovah tamin’i Kaina sy Baroka no manaporofo fa tia azy ireo izy?
12 Vao hitan’i Jehovah hoe nitady hanao zavatra tena ratsy i Kaina, dia nampitandremany sy notoroany hevitra. Hoy izy: ‘Nahoana ianao no tezitra be, ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Tsy hisandratra ve ianao raha mba miova ka manao ny tsara? Ary ho voafehinao ve ny ota?’ (Gen. 4:6, 7) Nampalahelo fa tsy nihaino an’i Jehovah i Kaina ka loza ny vokany. (Gen. 4:11-13) Nisy fotoana koa reraka sy kivy i Baroka, mpitan-tsoratr’i Jeremia. Nanoro hevitra azy i Jehovah mba hahitany ny tsy mety nataony. Nanaiky ny torohevitr’i Jehovah izy fa tsy hoatran’i Kaina. Voavonjy àry izy.—Jer. 45:2-5.
13. Nahoana no avelan’i Jehovah iharam-pitsapana ny mpanompony tsy mivadika?
13 Hoy i Paoly: “Izay tian’i Jehovah no faiziny. Manasazy mafy an’izay raisiny toy ny zanaka izy.” (Heb. 12:6) Tsy manasazy fotsiny anefa i Jehovah fa mananatra sy mampiofana koa. Resahin’ny Baiboly, ohatra, fa maro ny mpanompony navelany hiaritra fitsapana mafy satria tiany hampiofanina. Anisan’izy ireny i Josefa sy Mosesy ary Davida. Anisan’ny tantara be tsipiriany sy mora alaina sary an-tsaina indrindra ao amin’ny Baiboly ny tantaran’izy ireo. Nampian’i Jehovah izy ireo tao anatin’ny sarotra ary nampanaoviny asa miavaka. Rehefa mamaky momba an’izany isika, dia vao mainka hiaiky fa tena tia sy mikarakara ny mpanompony i Jehovah.—Vakio ny Ohabolana 3:11, 12.
14. Inona no mampiseho fa tia antsika i Jehovah, na dia manafay antsika aza?
14 Marina fa manafay an’izay manao fahadisoana i Jehovah. Raha tena mibebaka anefa ilay olona, dia “tena mamela heloka tanteraka” izy, ary porofo koa izany fa tia antsika izy. (Isaia 55:7) Hoy i Davida: “Fa izy no mamela ny fahadisoanao rehetra, sy manasitrana ny aretinao rehetra. Izy koa no manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, sy manome anao satroboninahitra, dia hatsaram-panahy sy famindram-po, fa toy ny halavitry ny atsinanana amin’ny andrefana, no anesorany ny fahotantsika ho lavitra antsika.” (Sal. 103:3, 4, 12) Tena manohina ny fo izany. Henoy foana àry ny torohevitr’i Jehovah sy ny fananarany, ary ahitsio avy hatrany izay tsy mety. Ekeo fa tena tia anao izy matoa manoro hevitra sy mananatra anao.—Sal. 30:5.
MIARO ANTSIKA IZY
15. Inona no porofo fa sarobidy amin’i Jehovah ny vahoakany?
15 Miezaka mafy hiaro ny fianakaviany amin’ny loza koa ny ray be fitiavana. Tsy latsak’izany i Jehovah, ilay Raintsika any an-danitra. Hoy ny mpanao salamo: “Miaro ny ain’izay tsy mivadika aminy izy, ary manafaka azy tsy ho azon’ny ratsy fanahy.” (Sal. 97:10) Arovanao tsara, ohatra, ny masonao satria sarobidy aminao. Sarobidy amin’i Jehovah toy ny masony koa ny vahoakany ka arovany.—Vakio ny Zakaria 2:8.
16, 17. Inona no porofo fa miaro ny vahoakany i Jehovah hatramin’izao?
16 Maniraka ny anjeliny i Jehovah indraindray mba hiaro ny vahoakany. (Sal. 91:11) Nahavita niaro an’i Jerosalema tsy hotafihin’ny Asyrianina, ohatra, ny anjely iray. Tao anatin’ny iray alina monja, dia nahafaty miaramila 185 000 ilay anjely. (2 Mpanj. 19:35) Nisy olona nafahan’ny anjely avy tao am-ponja koa, anisan’izany ny apostoly Petera. (Asa. 5:18-20; 12:6-11) Miaro ny vahoakany koa i Jehovah ankehitriny. Nisy ady ara-politika sy ara-pivavahana, ohatra, tao amin’ny tany iray atsy Afrika. Nanao tatitra ny solontenan’ny foibe nitsidika tany fa nikorontana tanteraka ilay firenena satria nanjaka ny ady, fandrobana, fametavetana, ary vonoan’olona. Tsy nisy maty anefa ny rahalahy sy anabavintsika, na dia very asa sy fananana aza ny maro taminy. Nanontaniana ireo mpiara-manompo amintsika ireo hoe nanao ahoana izy ireo. Sady nitsikitsiky izy rehetra no niteny hoe: “Misaotra an’i Jehovah fa tsy misy maninona izahay!” Tsapan’izy ireo fa tia azy tokoa i Jehovah.
17 Marina fa avelan’i Jehovah hovonoin’ny fahavalony ihany ny mpanompony indraindray. Izany, ohatra, no nanjo an’i Stefana. Miaro ny vahoakany amin’ny fitambarany anefa izy ka ampahafantariny azy ireo mialoha ny teti-dratsin’i Satana. (Efes. 6:10-12) Hitantsika ao amin’ny Teniny sy ny boky aman-gazety avoakan’ny fandaminany izany. Asaina mitandrina tsara, ohatra, isika rehefa mampiasa Internet. Ampiana koa isika mba tsy hanao fialam-boly misy fijangajangana sy herisetra, ary tsy ho tia harena. Ray be fitiavana tokoa i Jehovah ka miaro ny vahoakany sy mitady izay hahasoa azy.
MANANA TOMBONTSOA MIAVAKA ISIKA
18. Inona no tsapanao noho i Jehovah tia anao?
18 Miavaka ny fitiavan’i Jehovah antsika, ary nandinika porofo vitsivitsy manamarina an’izany isika tato. Resy lahatra toa an’i Mosesy àry isika fa tia antsika tokoa i Jehovah. Hoy izy rehefa avy nisaintsaina an’ireo taona maro nanompoany an’i Jehovah: “Aoka ho heniky ny hatsaram-panahinao feno fitiavana izahay rehefa maraina, mba hihobianay sy hifalianay amin’ny andro rehetra iainanay.” (Sal. 90:14) Fantatsika sady tsapantsika fa tian’i Jehovah isika. Anisan’ny tombontsoa miavaka indrindra ananantsika izany. Mitovy hevitra amin’i Jaona, izay nilaza toy izao isika: ‘Eritrereto ny fitiavana nasehon’ny Ray antsika.’—1 Jaona 3:1.
Hizara Hizara Inona no Manaporofo fa Tia Antsika i Jehovah?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2015
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2015